Hardisk ပျက်လို့ပြင်မယ် ဆိုရင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Hardisk ပျက်လို့ပြင်မယ် ဆိုရင်
27-07-2009, 10:34 AM
ပို့စ်9ခုအတွက် 129 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မြန်မာမိသားစု က ယူထားတာတွေ များနေပြီဆိုတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လေး ပြန်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်
နှင့် ဒီတော့ပစ်လေးကို စဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ ပထမဆုံး ပြောပါရစေ။
ကွန်ပြုတာတစ်လုံး မှာ Hardisk ဟာ Data တွေ သိမ်းဆည်းတဲ့ နေရာမှာ မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။
ဒါကြောင့် Hardisk တွေပျက်ပြီဆိုရင် တော့ သွားပြီပေါ့။ ကိုယ်သိမ်းထားသမျှလေးတွေ ခဏလေးမှာတင်ကုန်ပါ
အဲဒီ Hardisk ဆိုတာ မျိုးက ပျက်နိုင်တာ အကြောင်းအများကြီးရှိတယ်။
အဲဒီ အကြောင်းအများကြီးထဲက မှ သုံးစွဲသူတွေ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတွေကတော့
၁. ပါဝါ ပြောင်းပြန် ထည့်မိလို့ Logical Board ရှိ Resistor လောင်ခြင်း
၂. Controller IC လောင်ခြင်း
၃. Motror Driver IC လောင်ခြင်း တို့က အဖြစ်များပါတယ်.။
ပထမဆုံး ပါဝါမှားထိုးမိလို့ Hardisk ကနေ ညော်နံ့ထွက်လာပြီး သုံးမရဖြစ်နေတဲ့ Hardisk ကိုပြင်ဆင်နည်းလေး
PATA ပဲဖြစ်ဖြစ် SATA ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကို ပါဝါ ကျွေးတဲ့ နေရာ မှာ ရှိတဲ့ PIN တွေရဲ့ အနောက်ဘက်နား လောက်မှာ Resistor အမဲရောင်လေးတစ်လုံးရှိပါတယ်။ Volt မှားယွင်းပြီး ပေးမိရင် အဲဒီကောင်လေးလောင်
ပြီး Hardisk ထဲ ပါဝါမ၀င်တော့ပါဘူး ။ပြောရရင်တော့ Hardisk ပျက်ပြီပေါ့။ သိမ်းထားသမျှလေးတွေ ကုန်လို့
- မိမိ ရဲ့ Hardisk က ဘာအမျိုးအစားလဲ ။အရင်သိဖို့လိုပါမယ်။ ဥပမာ...Seagate, Samsung....
- သိပြီဆိုရင် အထက်မှာပြောပြထားတဲ့နေရာက Resistor လေး ရဲ့ အပေါ်မှာ နံပတ်လေးရေးထားပါတယ်။
ှု ဥပမာ...BUF C133 (Segate) ,BUX P416 (Samsung).....။
-အဲဒီလို နံပတ်တူတဲ့ ဒါမှမဟုတ် နံပတ် အနီးစပ်ဆုံးတူတဲ့ Resistor တစ်လုံး အစားထိုးလဲလှယ်ပေးပါ။
-သတိပြုရမှာ က အဲဒီ Res လေးကို ဖြုတ်စဉ် ကအတိုင်း ပြန်လည်တပ်ဆင်ပေးဖို့ပါ ။ Direction မမှားဖို့ပါ။
-ပြီးရင် ပါဝါ ပြန်ပေးပါ ။Hardisk အကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီဆိုတာနှင့် ပထမဆုံးလုပ်ရ
မှာက အဲဒီ အထဲက Data တွေ အလျှင်အမြန် Back up ပြန်ပေးပါ။ပြန်ပြီး ပြီဆိုရင် Format ပြန်ချပြီး သုံးလို့
မရှင်းလင်းတာများရှိရင် မေးပါ။ ကျနော် ပြန်လည်ပြီး ဖြေကြားပေးပါမယ်။ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲဗျာ..။
နောက်တစ်ခါ ကျရင် Controller ပြင်တဲ့နည်းကို ပြောပေးပါမယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 56 ဦးတို့မှ NayminKyalsin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသက်ဇော်, ချစ်သားငယ်လေး, ဆန်းမောင်, ညိုမင်းလူ, တက်တူး, ဒဿဂီရိ, ပွင့်ဖူးမွန်, ဖန်နေ၀န်း, လီယိုနာဒို, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သန်းထိုက်အေး, ဟိန်းသူအောင်, ဦးသိဝါနန္ဒ, ကောင်ပေါက်စ, ကောင်းကင်ထက်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်ပေါ်ဦး, ယောနသန်, အောင်ကျော်ဆန်း, ငြိမ်းချမ်း, ကြက်ရိုး, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, သြကောင်, ဖြိုးယံလေး, aungkohtat, AZM, blackNwhite, bonge, boya, chitnyimalay, ko myo, kokyukke, linthuraaung, linyone, moe_poung, Myo Min Zaw, myonwe, naingthu, naylumin2010, nyilynnpaing, phoetharlay, phyomyintthein, phyuphyukyaw, powerlight02, runner.zaw, soemaung, spaceboy, stability09, thurein, tinmyoaung, tu tu, wahgyi, zo
Find More Posts by NayminKyalsin
27-07-2009, 07:24 PM
ပို့စ် 31 ခုအတွက် 128 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Hardisk ပျက်လို့ပြင်မယ် ဆိုရင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုတော့အဲဒီလိုမဖြစ်သေးဘူး။နောက်ဖြစ်ရင်လုပ်ဖို့မှတ်သားထားပါတယ်။ ကျွန်တော် sata hardisk လေးကိုကူညီကြပါအုံး။ bios ကတော့ 80 Gbဆိုပြီးပြတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ format လဲလုပ်လို့မရဘူး။ ၀ယ်ထားတာလဲအရမ်းတော့မကြာသေးဘူး။ တချို့သော hardisk software တွေနဲ့ လုပ်ကြည့်တယ်မရဘူး။ seagate အမျိုးအစားပါ။ seagate ကပေးတဲ့ utility နဲ့ format လုပ်လဲမရဘူး ကူညီကြပါအုံး။
Find More Posts by ကိုဘွဲ
27-07-2009, 10:15 PM
ပို့စ် 25 ခုအတွက် 119 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်းအဲလိုကြုံဖူးတယ်ဗျ။ ကိုယ်တိုင်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့် ညီတစ်ယောက်ဖြစ်တာ။ သူက ပြောတာ ကတော့ ညက ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကို ဒီတိုင်းပိတ်ပြီးအိပ်တယ်။ မနက်ရောက်တော့ ကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက် တဲ့ အချိန်မှာ ကွန်ပျူတာကဘာမှ တက်မလာတော့ဘူးတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်က ဘာဖြစ်လည်း ဆိုပြီးကို ကွန်ပျူတာ ကိုဖွင့်ပြီးတော့ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ကွန်ပျူတာက hard disk ကို မသိဘူး CD ထည့်ပြီး ဖွင့်ကြည့် ပါလို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က windows CD ထည့်ပြီး ဖွင့်ကြည့်တော့လည်း အဆင်မပြေဘူး။အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော် windows တင်မယ်ဆိုပြီး အစအဆုံးဝင်းဒိုးတင်လိုက်တာ။ဘာဖြစ်လည်း ဆိုတော့ windows တင်တော့လည်း သူက ပြောတယ် hard disk က off ထားတယ် on လိုက်ပါလို့ ပြောတယ်။ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ခေါင်းတော်တော်စားသွားတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ hard disk ကိုလည်း power off မထားမိဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုပြီးတော့။ ဟိုလို စမ်း ဒီလိုစမ်းနဲ့ ဘယ်လိုမှ မရဘူး hard disk ကို မသိဘူးချည်းပြောနေတယ်။ အချိန်တွေလည်းတော်တော် ကုန်သွားတယ်။ဘာဆက်လုပ်၇မှန်းလည်း မသိတော့ဘူး။ တခြားးကွန်ပျူတာမှာ စမ်းတော့လည်း မရဘူး။ ဒါနဲ့ဘာ ကြောင့်လည်း ဆိုပြီးစဉ်းစားရင်း hard disk ကို ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ hard မှာ Sata ကြိုးထိုးတဲ့ အပေါက်ကလေးက ပဲ့နေတယ်။ဒါကြောင့် ကြိုးကမမိတော့ ကွန်ပျူတာက မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး တော့ ကျွန်တော်လည်း hard disk ကိုယူပြီး ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ကို သွားပြင်ရတော့တယ်ဗျာ။
သူငယ်ချင်းတို့လည်း နောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်လို မလွဲရအောင်ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ soemaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, တက်တူး, ဟိန်းသူအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, ကြက်ရိုး, aungkohtat, pannuko, phoetharlay, phyuphyukyaw
Find More Posts by soemaung
Originally Posted by ကိုဘွဲ
ပါဝါ၀င်ပါတယ်..ဒီအတိုင်းဆိုရင်။ ကျနော် ကို တစ်ခုလောက် ပြောပြပေးဗျာ။ အရင်ဆုံး HDDGURU.COM ကနေ
Low Level Format Tool ဆိုတာနှင့် Format ချကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ထွက်ပေါ်လာမယ့် Error တွေ အကြောင်း
နဲနဲလောက်ပြောပြပေး။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Seagate ရဲ့ Firmware Version လေးပါ ..ပြောပြပေးပါဗျာ..
နောက်တစ်ခုက ၀ယ်ထားတာမကြာသေးဘူးဆိုတော့ Warranty ရှိသေးတယ်ထင်တယ်။ ဆိုင်ကိုပြန်လဲလို့
ရရင် လဲလိုက်ပါလား။လဲလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ ကြိုးစားပြီးပြင်ကြည့်တာပေါ့ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ NayminKyalsin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိကိ, ဆန်းမောင်, လူမုန်း, သက်နိုင်, ငြိမ်းချမ်း, ကြက်ရိုး, ဖြိုးယံလေး, aungkohtat, linyone, phoetharlay, phyomyintthein, spaceboy, tinmyoaung
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ......တင်ပေးတဲ့အတွက် အများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...နောက်များလည်း တင်ပေးပါဦးလို့ ......
Visit kyawhtin's homepage!
Find More Posts by kyawhtin
အခုက hardisk ကို bios ကနေပဲသိတော့တယ် windows ထဲရောက်တဲ့အခါ hardisk ကိုမတွေ့တော့ဘူး low level format tool ဆိုတာက windows ကသိမှ ရတာမဟုတ်ဘူးလား။ နဲနဲရှင်းပြပါအုံး။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုဘွဲ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
21-11-2009, 09:59 AM
ကျနော်အဲ့ဒီပြဿနာ ကြုံတုန်းက ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလေး ပြောကြည့်မယ်ဗျ.. ကျနော့်သူငယ်ချင်းတယောက် အဲ့ဒီလို Resistor လေးလောင်သွားတာ ဒီမှာက အစားထိုးစရာ ပြန်ရှာဖို့ကလည်းမလွယ် ဘူးလေ ။ဒါနဲ့ ကျနော် ကော်ကို မီးရှို့ ပြီးလောင်းပေးလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတာပဲ၊ အခုဆို တစ်နှစ်တောင်ကျော် လောက်ရောပေါ့ ဘာအသံမှ မကြားရဘူး။ မြန်မာနည်း မြန်မာ့ဟန်ပေါ့ဗျာ Resistor ရှာရတာမလွယ်ရင် စမ်းကြည့်ကြပေါ့
ဒီနေ့(28.05.2010)မှာလည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အဲ့ဒီလိုပြဿနာတတ်လာလို့ မိသားစုဝင်တွေကြူံလာခဲ့ရင် ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ထပ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်...HDD မှာ အပေါ်ကပြထားတဲ့ Resistor လေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင် HDD က အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အတွက် စက်မှာမပေါ်တော့ပါဘူး..(စက်မှာ HDD မပေါ်တော့ပဲ ဆိုင်မှာပြန်လဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ စမ်းကြည့်ကြပေါ့ဗျာ) ပုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် Resistor ဘေးနားမှာ နည်းနည်းမည်းနေပြီ မီးခိုးလေးတွေထွက်လာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်.. Resistor ကို သံအမာတစ်ခုခုနဲ့ ရှင်းထုတ်လိုက်ပြီး တစ်ဖက်စီမှာ ကျန်နေခဲ့တဲ့ သံပြာလေးနှစ်ခုကို အောက်ကအစိမ်းရောင်ဘုတ်နဲ့ ထိမနေအောင် အပေါ်ကို နည်းနည်းထောင်ထားလိုက်ပြီး ထိပ်ချင်းတေ့ဆက်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် တေ့ဆက်ထားတာ ပြုတ်မသွားရအောင် အပေါ်ကနေ ကော်ကိုမီးရှို့ပြီး လောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပါပဲ
Last edited by Myo Min Zaw; 28-05-2010 at 05:35 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဝင်းအောင်, pannuko, phoetharlay, phyuphyukyaw, thurein, yewinnaung
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Feb 2011
အစ်ကိုရေ ကူညီပါဦး ကျွန်တော် Hard disk က ကွန်ပျူတာက ခဏပဲသိတယ် ပူလာရင် ပြန်ပြုတ်သွားတယ် မသိတော့ဘူး၊
ဝင်းဒိုး လဲတင်လို့မရတော့ဘူး၊ အဲဒါ ပြန်သုံးလို့ရသေးလားလို့သိချင်လို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ပညာရှာသူ၀၉ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ပညာရှာသူ၀၉
26-06-2013, 11:32 AM
ပို့စ် 69 ခုအတွက် 248 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကြုံတုန်းလေး ပြသာနာ ရှာပါရစေ။ အဲလေ ပြသာနာ ပြောပြပါရစေ။
ဖြစ်တာက ဒီလိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ window တင်ရင်းဖြစ်တာပါ။ window xp တင်နေရင်းနဲ့ပါ။ copy file အဆင့်ပြီးလို့ အော်တို restart ကျပြီး window ပြန်တက်တဲ့အခါ window xp ပါဝါတန်း အဆင့်ပဲတက်ပြီး အပြာရောင်စကရင်နဲ့ harddisk ကို ဖိုင်စီဖို့ပဲပြောပါတယ်။ harddisk ချင်းပြန်ချိတ် အဲဒီ window တင်မယ့်အပိုင်းကို ဖိုင်စီပြီး တော့လည်း window ပြန်တင်တဲ့အခါ အဲဒီ error ပဲ ပြန်တက်နေတယ်။ နောက်ဆုံး အဲဒီ အပိုင်းကို လုံးဝ window တင်လို့မရတော့တာပါပဲ။ ကျန်တဲ့(၁)ပိုင်းကလဲ data တွေ အရေးကြီးတော့ harddisk တစ်ခုလုံး format လည်း မရိုက်ရဲဘူးခင်ဗျ။ အဲတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ နောက်တစ်လုံးကျတော့လည်း harddisk တစ်ခုလုံး format ပြန်ရိုက်လည်း ဒီအတိုင်း error ပြန်တက်ပါတယ်။ window မတင်ပဲ ဒီအတိုင်း ဒေတာ save တဲ့ ပါတေးရှင်း အဖြစ်သုံးတော့ရပါတယ်။ ကူညီကြပါအုံး ၀င်းဒိုးအခွေက ဖြစ်တယ်ထင်လို့ အခွေလဲပြီး တင်တော့လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ (၄)ခွေလောက်ရှိပါပြီ။ နေရာမှားပြီး TOPIC တင်မိရင် SORRY ပါခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ လီယိုနာဒို အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by လီယိုနာဒို
ပို့စ် 117 ခုအတွက် 409 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွှန်တော်ဒက်စတော့က ဟက်ဒစ်ကတော့အထက်မှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေတာ ပြန်ပြီးစမ်းပြီးပြင်
ကြည့်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ....ဟက်ဒစ်ကလောင်သွားတာ ပါဝါ မှားထိုးမိတာဖြစ်မယ်ဗျ........ဟက်ဒစ်ထဲမှာကအရေး
Find More Posts by အောင်ကျော်ဆန်း
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 114 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
[size=" "]အကိုတို့ အမတို့ ဟုတ်ပါတယ် အပေၞကအကိုပြောသလို ပျက်ရင်မလွှင့်ပစ်ကြပါနှင့် အပြင်က နေပါဝါပေးပြီး အိုင်ဒီအီး ကို ယူအက်စ်ဘီ သို့မဟုတ် ဆာတာ လုပ်ပြီး ကွန်ပြူတာနှင့် သာမာန်ဒေတာတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်..နောက်တစ်ချက်ကလေ..ဆာစကစ်ပြားကို မိုဒယ်တူ နံပါတ်တူတာလဲပြီးသုံးတာပိုကောင်းပ့ါတယ်..ကျနော်ဒီအတိုင်း လက်တော့တွေအပျက်ကဟာတွေကို အပြင်ထားသုံးနေတာတာ ၅၀၀ နှစ်လုံးအဆင်ပြေနေတယ်.[/size]
Last edited by မောင်စိန်ရွှေ; 01-08-2013 at 10:27 AM..
Find More Posts by မောင်စိန်ရွှေ
Originally Posted by ပညာရှာသူ၀၉
ရတယ်အကို အိုင်ဒီအီး လားဆာတာလား အိုင်ဒီအီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆာတာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို ပြောင်းသုံးလို့ရတယ်အကို ide to usb to sata ပြောင်းသုံးလို့ရတာ ၀ယ်လိုက်အကို ပါဝါကိုတော့ ပုံးထဲက ဟာနှင့်ကြွေး ပြီးတခြား ၀င်းဒိုးတက်နေတဲ့ အခါ အပြင် ဟဒေ့အနေနှင့်သုံးလို့ရတယ်အကို ဒေတာတွေပြန်ရနိုင်ပါတယ်...သူကို ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် လက်မောင်းမော်တာကို ဖြုတ်လဲမှရမယ်သိပ်မလွယ်ကူဘူး...ဆားကစ်လဲကြည့်ရင်ရတယ်တယ်အကို......၀၉၄၂၀၀၆၅၇၃၂ ဆက်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်
Originally Posted by လီယိုနာဒို
----------မားသားဘုတ် ကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်အကို သတိထားရမှာက ဟဒေ့တွေပျက်တတ်ပါတယ်...ဖရီကွင့်စီမမှန်ကန်မှုကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်.....bio battery ခဏဖြုတ်ထားပြီး ပြန်စမ်းကြည့်ပါ..ဟဒေ့အပျက်များတတ်ပါတယ် ဘုတ်ကိုသတိထားစမ်းပါ
hardware guide, hardware howto, hardware knowledge
Gmail account ကို hardisk ထဲမှာ Backup လုပ်မယ် istein Applications321-03-2010 03:24 PM
Keylogger ကာကွယ်ရေး မောင်ကောင်းထက် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 21 26-09-2009 10:13 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 01:07 AM